Hootfeed साथ तपाईंको अर्को घटनामा एक Tweetwall जोड्नुहोस् Martech Zone
के तपाईसँग कहिले चाहिएको थियो? ट्वीट भित्ता तपाईको अफिसमा वा कुनै घटनामा? त्यहाँ बाहिर केहि समाधानहरू छन्, तर कुनै पनि यसको रूपमा प्रयोग गर्न सजिलो छैन Hootsuite को Hootfeed। हूटफिड एक अनुकूलन गर्न अनुकूलन उपकरण हो, जुन तपाइँ लाइभको बारेमा ख्याल राख्नुहुने ट्विटर गतिविधिलाई एनिमेट गर्दछ; तपाईंको पाहुनाहरुलाई घटनाको फिडसँग कुराकानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै। तपाईंको घटना वरिपरिको पर्दामा दृश्य ट्वीटहरू प्रदर्शन गरेर, तपाईं एक सिर्जना गर्नुहोस् ट्वीट भित्ता तपाईंको पाहुनाहरू संलग्न हुन सक्छन्।
Hootfeed एक पूर्ण स्क्रीन डिस्प्ले प्रदान गर्दछ जुन कुनै पनि आकारको स्क्रीनमा स्केल गर्दछ, एक अपवित्र फिल्टर, र तपाईंको ब्रान्डमा अनुकूलन हो।
टैग: hootfeedhootsuiteट्वीट भित्ताट्वीटवाल